Cerro del Hierro, ihe ịtụnanya dị na mpaghara Seville | Akụkọ Njem
Cerro del Hierro bụ nnukwu eke ihe ncheta emi odude ke n'ógbè Sevilla ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị mita asaa n’elu elu osimiri. Erigbu dị ka m ebe ọ bụ na Roman oge, ọ Nleta, ya na gburugburu ya, na Ogige Ugwu Sierra Norte.
Dị ka aha ya na-egosi, e ji ya kpọrọ ihe nke ukwuu maka akụ na ụba dị na hierro nke nkume nzu nke ya. Ma ugbu a, ọ dị mkpa na mbara ala mara mma nke mejupụtara ya karst. Ma, nke kachasị, maka uru ọ bara na maka izu oke maka hiking na ịrị ugwu. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu Cerro del Hierro nke ọma, anyị na-agba gị ume ka ị gụọ akwụkwọ.
1 Ihe omuma nke Cerro del Hierro
2 Ihe ị ga-eme na Cerro del Hierro
2.1 Okporo akwụkwọ ndụ nke Sierra Norte de Sevilla
2.2 Cerro del Hierro nzọ ụkwụ
2.4 Ngwuputa obodo
3 Obodo abụọ mara mma gbara gburugburu Cerro del Hierro
3.2 Saint Nicholas nke Port
4 Otu esi aga Cerro del Hierro
Ihe omuma nke Cerro del Hierro
Ebe Cerro del Hierro si malite Oge Cambrian, nke ahụ bụ ịsị ihe dịka narị afọ ise gara aga. Emere ya site na akwa akwa mmiri nke amigoro na okwute okwute. N'ikpeazụ, ala ahụ bụ karstified na-agbanwe akụkụ nke ígwè ya bara ụba na oxides na hydroxides nke mekwara ka ọ ghọọ veins.
Ihe a niile kpatara dugara Cerro del Hierro, bụ nke, dị ka anyị gwara gị, ndị Rom malitere. N'ihe dị ka narị afọ nke iri na itoolu, ụlọ ọrụ ndị Scotland na-egwupụta ihe egwupụta ma kee ihe obodo nke a ka bi na ya mere ị ka nwere ike ịga leta taa. E nwere ọbụna ụzọ ụgbọ okporo ígwè nke jikọtara mpaghara a na ọdụ ụgbọ mmiri nke Seville maka ịnyefe ígwè.
Na ndụ na mpaghara ahụ ekwesịghị ịdị mfe, ebe ọ bụ na a na-akpọ ya "Seville's Siberia", ikekwe na-ekwubiga okwu ókè. Otú ọ dị, eziokwu bụ na, n'oge oyi, okpomọkụ nke ogo dị n'okpuru efu na-eme.
Ihe ị ga-eme na Cerro del Hierro
Dịka anyị kọwara, mpaghara a dabara adaba rịa na hiking. Banyere nke abụọ, ọ nwere oke ọhịa na ọtụtụ ụzọ ndị mara mma nke na ị gaghị echefu ha. Anyị ga-egosi gị abụọ n'ime ha dịka ọmụmaatụ.
Okporo akwụkwọ ndụ nke Sierra Norte de Sevilla
Kpomkwem ihe okirikiri nhọrọ ukwuu nke anyị kpọtụrụ aha na mbụ agbanweela ka ọ bụrụ ahịhịa ndụ nke ị nwere ike iji ụkwụ ma ọ bụ jiri igwe kwụ otu ebe. Akụkụ nke Ngwuputa obodo n'onwe ya na, karịa kpọmkwem, nke a na-akpọ Oflọ nke Bekee, nke jere ozi dị ka ebe obibi maka ndị injinia na ndị nlekọta nke ebe ochie m. Ugbu a, ọ nwere ụlọ a nkọwa Center na Cerro del Hierro.
Cerro del Hierro nzọ ụkwụ
Ọ bụ ụzọ ọzọ dị mfe ebe ọ nwere naanị kilomita abụọ. Ọ bara uru ileta ya maka ịma mma ya, yana usoro okike dị iche iche lapiasi na agịga. Ma kwa n'ihi na ọ na-abanye na tunnels na veranda nke ochie m.
Cerro del Hierro bụkwa ebe zuru oke maka ịrịgo. N'ezie, enwere ebe kachasị mkpa iji mee egwuregwu a na mpaghara Seville niile. Na mkpokọta, o nwere ụfọdụ otu narị na iri abụọ ụzọ na-agụnye ụfọdụ nke kpochapụwo ịrị ma ndị ọzọ ọzọ oge a na mgbagwoju anya. Ọ bụrụ na egwuregwu a na-amasị gị, ọ dị mkpa ka ị mara Cerro del Hierro.
Na mgbakwunye na ịnụ ụtọ okike, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị gaa n'obodo ochie a na-egwupụta egwu nke anyị gwara gị na mbụ. N'ime ya, na mgbakwunye na ịhụ ụlọ nke ụlọ, ị ga-ahụkwa ebe a na-egwupụta akụ, ụlọ nkwakọba ihe, a Anglịkan ụka na nke ochie ọdụ ụgbọ oloko. I nwekwara ebe nkọwa anyị kpọtụrụ aha na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ebe ị nwere ike ịgbapụta batrị gị.
Old Anglican ụka dị na Cerro del Hierro
Obodo abụọ mara mma gbara gburugburu Cerro del Hierro
Ma nleta gị na ihe ịtụnanya a agaghị ezu ezu ma ọ bụrụ na ị maghị obodo abụọ mara mma dị ya nso, dị kilomita ole na ole, nke dịkwa n'etiti ihe kachasị mma n'ógbè Seville. Anyị ga-agwa gị banyere ha.
Nnọọ nso Cerro del Hierro ị ga-ahụ obere obodo ọcha a nke ihe dịka puku mmadụ isii bi na ya Sierra Morena. Kwusara Mgbanwe nke Artistical Historical, obodo Constantina nwere ọtụtụ ihe inye gị.
Iji malite, ị nwere ike ịga leta ha ụlọ. E wuru ya na oge Arab dika odi nke ochie ochie. Otú ọ dị, mgbanwe ndị ọhụrụ ya malitere na narị afọ nke XNUMX. Ọ bụ akụ nke ọdịbendị ọdịbendị na, ọ bụ ezie na oge gafeworo na mbibi ya, emeela mgbanwe n'oge dị mkpirikpi.
Kwesịrị ị gara na Constantina na Chọọchị nke Nwanyị Nwanyị Anyị, ụlọ nsọ Mudejar site na narị afọ nke XNUMX, ọ bụ ezie na nnukwu ụlọ elu ya sitere na narị afọ nke XNUMX. N'otu aka ahụ, ọ ga-adị mma ma ị gaa ụka nke Nuestro Padre Jesús na La Concepción na ndị mọnk Santa Clara na Tardón.
Mana ikekwe ihe kachasị mma banyere Constantina bụ nke ya akụkọ ihe mere eme okpu agha, ya na neoclassical ụlọ nke Town Hall na ọtụtụ ọmarịcha ụlọ na regionalist ma ọ bụ ohiha neoclassical ịke. Ezigbo ihe atụ n'ime ha bụ Casa eze nke ọnụ ọgụgụ Fuente. N'ikpeazụ, anyị na-akwado ka ị gafere mpaghara Morería wee hụ seelọ Elu Elekere.
Saint Nicholas nke Port
Ọzọkwa kilomita ole na ole site na Cerro del Hierro ị ga-ahụ obodo a mara mma nke dị obere karịa nke gara aga dịka ọ nwere ihe dị ka narị mmadụ isii. N'ime ya ị nwere ike ịga leta ndị mara mma Ụka Mudejar nke San Sebastián, nke bu akuku ebe emere ya baptism San Diego de Alcala.
Naanị ihe ncheta ya bụ hermitage nke San Diego, kwa Mudejar. Na, n'akụkụ ndị a, na Akwa mmiri Rome n'ofe mmiri Galindón, narị afọ nke XNUMXth transept na foduru nke ụlọ elu ndị Alakụba.
Mana San Nicolás del Puerto ka nwere ihe ijuanya ọzọ maka gị. Ọ bụ ihe gbasara Mmiri mmiri Huesna, ihe ncheta eke nke anyị na - adụ gị ọdụ ka ị hụ. O nwere obere mmiri iyi na ọdọ mmiri ndị ọhịa na ahịhịa ndị dị n’akụkụ osimiri gbara gburugburu.
Otu esi aga Cerro del Hierro
Nanị ụzọ ị ga-esi banye na mbara igwe dị egwu bụ n'okporo ụzọ. Nwere ike ịnweta ya site na Constantina na ndịda ma ọ bụ site na San Nicolás del Puerto ruo n'ebe ugwu. Na nke mbụ, ị ga-agarịrị ụzọ ahụ A-455 na mgbe ahụ SE-163. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị na-eme njem site na San Nicolás, ụzọ bụ, ozugbo, na SE-163.
Na mmechi, Iron Hill Ọ bụ ihe ncheta magburu onwe ya ebe ị nwere ike ịrị ugwu na ịga njem. Mana ka obi di gi uto na ala ya ma jee leta obodo abuo mara mma anyi kwuru. Ọ bụrụ na inwere ohere, gaa leta ya, ị gaghị akwa ụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Ecotourism » Iron Hill